Shir lagu dardar galinayo Amniga Caasimada Muqdisho oo lagu qabtay Muqdisho ( Sawiro ) – Radio Daljir
Juunyo 3, 2019 7:36 b 0
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ( Khader) ayaa guddoomiyay Shirka dardar galinta Amniga Caasimadda oo lagu qabtay Xarunta Taliska qaybta guud ee Booliiska Gobalka Banaadir.
Kulanka oo ay kasoo qayb galeen xubno ka tirsan Wasaaradda amniga gudaha, Guddoomiyaha gobalka Banaadir, taliyaasha Ciidanka iyo khuburo amni ayaa diiradda lagu saaray dardar-gelinta iyo ka mira dhalinta qorshaha sugidda amniga dalka gaar ahaan amniga caasimadda.
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Dalka Mahdi Maxamed Guuleed ( Khader) oo kulanka,kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu sheegay in amniga Caasimadda haatan uu marayo meel wanaagsan,isla markaana hay’addaha amniga ay si weyn u shaqeynayaan.
Sidoo kale Mahdi Maxamed Guuleed ayaa waxaa uu tilmaamay in shaqada guddiga amniga uu haayo ay si dhow ula socdaan Madaxda dalka ugu Sarreysa,isagoona shacabka ugu baaqay inay la shaqeyaan laamaha amniga dowladda.
Hay’adaha amniga ayuu Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Dalka kula dardaarmay in ay laba jibaaraan dadaallada ay ugu jiraan xasilinta caasimadda si ummadda Soomaaliyeed ay u helaan nabad buuxda .